Namni tokko sagantaa TV tokko natti erge, dubbiin huuba turte, kan dhimma baasef akka jiru waan hubadheef waa jechuu barbaade. – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooNamni tokko sagantaa TV tokko natti erge, dubbiin huuba turte, kan dhimma baasef akka jiru waan hubadheef waa jechuu barbaade.
Namni tokko sagantaa TV tokko natti erge, dubbiin huuba turte, kan dhimma baasef akka jiru waan hubadheef waa jechuu barbaade.
Guraandhala 23, 2021
1. Maaltu kanaan isaan gahe?
“Bara Wayyaanee cal’isanii, bara namni keenya aangoo qabate itti duulan, obsa dhaban, aangoof boloolan, alagaan mataa gad-qabatee hojii siyaasaa yemmuu hojjatu, warri keenya mootummaa waliin xiiqii seenaa ture. Waraanas akka filannootti qabatan, hidhata waliin qabu, yakka kanaaf hidhaman. Of-hinqopheessine,miseensi yoo hidhamu,kan bakka bu’u hinqopheessine….”
Nama siyaasa beeku fi siyaasaa oromoo hordofaa tureef, waan kun dhokataa miti, xiinxalli madda olola akkasiis gamnummaa addaa hinbarbaadu. Garuu kanas nama hinhubanne hubachiisun dirqama keenya waan ta’eef, ni deebsina hubannoof.
Bara Wayyaanee ciisanii kan jedhu nu hinilaallatu, nuti ciifnee hinbeeknu. Qabsoon bilisummaa haala qabsicha mudate waliin takka takka laafaa yeroo kaan jabaataa deemu mala. Garuu warri ofii ciisaa bahee eengadda qabsoo qeerrotiin aangon itti mul’annaan dammaqe, warri waggoota 27 ergamaa bahe, saba keenya irratti Wayyaanef meeshaa tahe gidiraa raawwachaa ture, osoo safuu beekee,nuun ciisaa baatan jechuuf haamilee hinqabaatu. Maalirratti obsa dhabnee? Seensa hoggana ABO irratti hookkara yemmuu kaasan, nama simannaaf dhufe, Burraayyuu irratti yemmuu ugguran, ajjeesan, hogganoota ABO hoteela Giyoon qubate ajjeessudhaaf hoomaa baasanii poolisiin hindeebifnee maal dubbanne? HD-dhaabbichaa akka Eritiraa irraa biyya hinseenne guyyaa simannaa jalaan gahanii, tikeettii xiyaaraa yeroo dhoowwatan,himanne? Dirree buufata xiyaaraa Booletti yaalin ajjeechaa yemmuu raawwatamu, hoteela Ilillii keessatti waan ta’e, yeroo Hogganoota WBO mariisisuuf Beegii dhaqanitti, Mandii irratti yaalii ajjeechaa harkaafi harkatti qabame himannee, hoo’ifannee?
Aangoof boloolle maal jenne? Dhuguma ji’a saditti aangoo qabanna jennee dubbannee beeknaa? Warri aangof boloole bar, karaa qaxxaamura warra filate, nu abaarun warra michooma tolfate. Nu abaaranii, nu arrabsanii, nu hamatanii, nu goomatanii isiniin firoomanii warri Beta-Mangistii sirbaa osoo jiru, akkamiin boloola aangotiin himatamna?
Dhuguma alagaan jedhame, hanga keenya mataa gad-qabatee? “Yoo barbaanne, reenfa miliyoona 20 lakkoofsisuu dandeenya!’ kan jedhee dhaadate bar nuu mitii. “Road Map nutu tolcheef, nutu hooggana kennaafi jira. Namni akka abaluu faa biyya keenya bulchuu mitii itti dhalachuuf gahuumsa hinqabu. Nu qixa uumaatti kabajamuu qabna, Oromoo nutu kanaaf sana barsiise…” maal hinjedhin?Maal hinjedhamin? “Barri keenya, yeroo keenya!” jedhee nutu fandala’ee? Har’a Qeerron jijjiirama fidde eessa jirti? Kan hanga keenya obse, kan akka keenya mataa gad-qabatee waa hunda danda’e inuma hinjirre. Miidhamaa maqaa balleessun garuu sirrii miti.
Tole, nuti mootummaan xiiqii qabanne haa jennu, gabbaruufii diddan jechuu sanaaf. Warri abdatee itti gale, warri “sumaaf yoo harka rukunne ni gaha!” jedhee sagada Waaqaf male kenneef eessa jira. Warri nu busheessaa midhaawuf carraaqe hoo? Warri amanee sirree jalatti qabuu dhama’e hoo?
ADO dursee baqeef, galanni maal ture? Leencoo Baatii Akkasitti Midiyaa Addunyaa irratti sobee isaaniif of-salphise maal badhaasan? Birhana-Masqal, dhittanee “ABOn baduu qabdi!” jedhe maaf xinnoo tursuu didan? Warra Waraana araarsee galchuuf dhama’e har’a akkamti qaban? Lammaa aangoo isaanif dabarsee kenne eessan gahan?
Osoo waahilota isaanitiif tolanii, nu mata jabnaan komachuuf hiree argatu ture.
Hidhata Waraana waliin qabnuuf adamfamna yoo ta’e, maaliif warra shakkiin hidhan irratti ragaa dhaban?
“Ofi hinqopheessine, yaada hinqabnu, caasaa hinqabnu!” yoo ta’e, kun isiniif galtee mitii maaltu isin cinqe? OBN irratti nu affeertanii, wallaalummaa keenyan nutti kolfuuf carraa qabdu ture. Yaada qabdu taanan, yaada maaliif dhukkaamsitu? Morkataa maaliif harkaaf miila hiitu?
Hanga meeqa hiitanitti nama bakka buufna? 50,000 harkaa qabdu, meeqa itti isiniif daballa? Hidhaa itti fufee jiruuf nama hingeeddarre jechuun, kan hafe naaf eeri jechuudha! Kan hidhame, yakka hidhamee osoo qabaatee, adeemsa seeratiin osoo murtoo argatee, ni fakkaatti ture. Namoota A/alangaa galmee isaanii cufe sirna hidhee taa’uf nama mormu Oromoo keessaa argutu salphina!
ADO, ABO-QC, ABO-T,PBO, KBO…. warra isaan abdate mara akka diiganii hogganoota jaarmiyaalee kanaa dhuunfaan akka dhiyaatan godhan namni argu, ABO ijjannoo isaatin jiru yoo kabajuu hanqate illee qeequf, haamilee eessaa argata?
2. “ABO filannoo keessaa bahuu hinqabu ture. Dheessee bahuun yaaddoo injifatamuuti!…”
ABOn filannoo keessaa bahe hinjenne! Ajandaa Ololaaf isinitti kenname, dursitanii dhangalaaftan. Kan injifatame, isa seera taphaa balleesse. Isa morkatoota ugguree, kophaa garmaamuf filate.
Waajirri Muummen poolisiin ugguramee eegama, Qodaalotni waajirichaa namni lama yoo hafu, namni 32 hidhaa jiru. Kun dhoorka dhaabicha irratti labsame. Kan jenne “Dhoorki, uggurri nurraa haa ka’u!” dha. Hindhoorkamne abbaan jedhu, Gullallee dhaqee haa ilaalu! “Dhoorkamtanii, garuu hirmaadhaa!” dubbiin jedhu garuu haasaa namaa miti!
Hogganaa Olaanaa ABO jaal Abdii Raggaasaa irratti beellamni guyyaa 10 irratti gaafatame.
SBS: Guraandhala 23/2021
Hogganaa Olaanaa MSHG-GS ABO kan tahan jaala Abdii Raggaasaa guyyaa har’aa mana murtii walii gala Oromiyaatti dhiyyaatanii kan jiran yoo tahu sababa hin beekamneen beellamni biraa guraandhala 25/2013tti akka ganama sa’aatii 10:00am irratti dhiyyaatan ajajameera.
Jaal Abdii Raggaasaa Guraandhala 29/2020 kan qabaman yoo tahu har’a waggaa tokko guutee jira.
Jaal Abdiin ani hidhamaa siyaasaati mana murtii irraa murtiin eeggadhu hin qabu isinis hin dadhabiinaa gaafa ajajni kenname na hiikaa kanaaf nan deddeebisiinaa jechuun ammaan dura mana murtiitti akka hidhamuu isaa irratti manni murtii fala hin goone dubbatee turuun ni yaadatama.
Biyyi tokko kan walaboomtus ta'ee,sabni tokko kan bilisoomu wacaa fi shaffee guddaan waan lallabaniifii miti!
Biyyi tokko kan walaboomtus ta'ee, sabni tokko kan bilisoomu wacaa fi shaffee guddaan waan lallabaniifii…
WBO: Irra Guddaa Shororkeessaa Taphaa Kan Jiru Motummaa dha
WBO: Irra Guddaa Shororkeessaa Taphaa Kan Jiru Motummaa dha Guraandhala 22, 2019 Godina Gujii aanaa…
A father 101 children from 12 wives; Namni tokko Haadha warra 12 irraa ijoollee 101 dhalchee
A father 101 children from 12 wives; Namni tokko Haadha warra 12 irraa ijoollee 101…
Sudan owns land where Ethiopia built dam, claims ex-negotiator
አቶ ዳውድ ኢብሳ የቁም እስረኛ ሆነው ባሳለፉበት ጊዜ ያጋጠማቸውን ነገር ተናገሩ – Ahadu_tv​
አስቻለ የማማው says:
የሀገር ያለህ! ኧረ ጉድ ፈላ! መላ እንበል ጃል!
በቅርቡ ከአንድ ወር ከማይበልጥ ጊዜ በኋላ ፤ በኢትዮጵያ መንግስት እገደላለሁ ፤ ስሞት ሬሳዬ ላይ እንዳትቆሙ ፤ አንድም ኢትዮጵያዊ ስሞት እንዳታዝኑልኝ ወይም እንዳትቀብሩኝ ሚስቴ ብቻ ትቅበረኝ ፤ በህይወቴ በቁሜ ያላዘናችሁልኝ ኢትዮጵያኖች ስሞት ጠብቃችሁ ሬሳዬ አጠገብ ከደረሳችሁ የተረገማችሁ ሁኑ ፤ ስሞትም ስለ እኔ የአሙዋሙዋት ታሪክ የውሸት ወሬ አታውሩ የሚል መልዕክት ያዘለ ማስጠንቀቂያ በአለፈው ሰኞ ዕለት ከታላቅዋ ብሪታንያ ተላልፍዋል ከታዋቂው የዳያስፖራ መብት አስከባሪ አቶ ቶሎሳ ኢብሳ።
Tofiq Adem says:
Ji’a sadi keysatti Abo angoo si irraa fuchuuf deemti, WBo qabatteto aango si gara galchuuf demti ka je’ee gorse Jawar Muhamad mataa isati. kana quba qabadhaa. Wbo qawee hiksisee OBDO hirkaa ango laafumatti fudhachuf ture gochan Juwar fi Lenco Lataa. hin taane malee, lachuu nyatamteree